Umugqa: Phatha Ipayipi Lakho Lokuthengisa ku-Gmail Ngale CRM Egcwele Okugcwele | Martech Zone
Njengoba sengizakhele idumela elihle futhi ngihlala ngisebenza esizeni sami, ukukhuluma kwami, ukubhala kwami, izingxoxo zami, kanye namabhizinisi ami… inani lezimpendulo kanye nokulandelwa engikudingayo ukwenza kaningi ukwehla ngemifantu. Anginakungabaza ukuthi ngilahlekelwe ngamathuba amahle kakhulu ngoba angilandelanga ngethemba ngesikhathi esifanele.
Empeleni, nokho, ukuthi isilinganiso sokuthintwayo engikudingayo ukuze ngithole ukuthola ukuzibandakanya kwebhizinisi esezingeni likhulu impela. Eqinisweni, ngiyaqiniseka uma ngilandelela zonke izicelo zokuthi angisoze ngaba nesikhathi sokuqedela umsebenzi wamakhasimende wangempela! Kodwa-ke, ukwakha ipayipi eliqinile kubalulekile njengoba uqedela amaphrojekthi futhi uqhubekela phambili kusuka kumakhasimende. Kufanele usebenze kahle ngesikhathi sakho… ngezikhathi ezithile uthinta okulindelwe ngakunye, ukuwafanelekisa, futhi ukuthuthuka ngenqubo yakho yokuthengisa.
Wonke amabhizinisi amakhulu anepayipi lokuthengisa elisebenza kahle lapho abona khona isigaba amathemba abo akuso, osondele kakhulu ekuvaleni, kanye nekhono lokubikezela amandla abo okuvala nokukhulisa ibhizinisi. Lokhu kuyangisabisa futhi angikholwa ukuthi isimo sami sihlukile. Ngikholwa ukuthi amabhizinisi amaningi amancane alwa nokuphathwa kwephayiphi lawo lokuthengisa nokwenza imikhondo efanelekile futhi engafaneleki. Ikakhulukazi lapho bengaqeqeshiwe futhi benolwazi lokuthengisa abanolwazi.
Yilapho a Ukuphathwa kobudlelwane beKhasimende (CRM) uhlelo luyisidingo. Nge-CRM, ungamaka amathemba akho, ugcine amanothi kuwo, ukhombe isigaba somjikelezo wokuthengisa abakuwo, wakhe imisebenzi yokulandelela, futhi uphathe ngokuphumelelayo ubudlelwane bakho bebhizinisi. Futhi… uma inhlangano yakho inamalungu amaningi, ungaphatha ngempumelelo ukukhishwa nokwabiwa kabusha phakathi kwabasebenzi bakho.
Umugqa: Phatha Ipayipi Lakho Lokuthengisa Ngaphakathi kwe-Gmail
Ukulungiselela nokuphatha enye futhi iphakheji yesoftware ukwenza lokhu kungumsebenzi omningi, hhayi ngaphansi. Umsebenzi omningi wenzeka nge-imeyili, ngakho-ke ukuba ne-CRM ehlangana neplatifomu yakho ye-imeyili kufanele kube lula nokusebenza kahle. Uma ibhizinisi lakho lisebenza ku -Google, I-Streak kungaba yisixazululo esifanele wena.
Umugqa uhlangana ngqo nebhokisi lakho lokungenayo le-Gmail, unama-plugins wesiphequluli, futhi unohlelo lokusebenza lweselula olukhulu. Izici zikaStrak zifaka:
I-CRM Ehlanganisiwe ye-Gmail - konke okudingayo ukuze ufike "ekuwinweni okuvaliwe" kufihliwe ku-imeyili yakho. I-Streak ithwebula amadili akho futhi inweba i-Gmail ekhona ibe yi-CRM eguquguqukayo, efakwe ngokugcwele.
Enza ngendlela oyifisayo Inqubo Yakho Yokuthengisa - Uma isu lakho lokuthengisa lishintsha, ukubuyekeza iStrak kuyashesha futhi kuyenzeka. Faka ikholomu entsha yanoma yiluphi uhlobo, hlela kabusha izigaba, noma susa idatha nganoma yisiphi isikhathi. Amakholomu enzelwe ngokukhethekile ukwamukela izinombolo, umbhalo wefomu yamahhala, amamenyu okudonsela phansi, amabhokisi wokuhlola, nanoma yini enye ongayidinga.
Thengisa ngokubambisana - Bonke abahlanganyeli abasethubeni bangafunda ama-imeyili agcwele noma ingafakiwe intambo. Futhi ungalawula ukufinyelela kwedatha kuwo wonke amalungu eqembu lakho ngezindima zemvume.
Iphaneli lokungenayo - Gcina amanothi, nikeza imisebenzi nokulandelela ngqo kusuka kuphaneli kuhlanganiswe kahle ngama-plugins wesiphequluli seStreak seChannel noma iSafari.
Amazwibela e-imeyili - Faka umbhalo ophindwe kaningi ngomyalo oyisihluthulelo. Bhala ngokushesha izingeniso, ukulandelela, nezikhumbuzi. Susa isikhathi esichithekayo nesicefe esiphindaphindwayo.
Ukulandelela i-imeyili - Ukulandelela kukwazisa ukuthi i-imeyili ibukwa nini, kuphi futhi kangaki. Sebenzisa i-Streak ukubiza ukuhola ngomzuzu ngqo abacabanga ngawe.
Mail ukuhlanganisa - Umugqa uqeda inkinga yama-imeyili amaningi. Bhala umyalezo wakho, khetha uhlu lwabemukeli, bese uthumela.
Ukubikwa Kwamapayipi - Ukwakha amashadi anemibala namagrafu kulula nge-Streak. Bona ukuthi imali ihamba kanjani ngepayipi lakho nokuthi ibaphi abanikeli ababa nomthelela omkhulu.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-Streak futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuhambisana kulesi sihloko.
Tags: uhlelo lokusebenza lwe-AndroidAndroid crmi-plugin yesipheqululii-plugin ye-chromeCRMukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendeLandelelaGmailI-gmail crmukulandelela i-gmaili-google suiteindawo yokusebenzela yakwa-googleuhlelo lokusebenza iOSI-iOS crmisabelo sokuholaiziqu zokuholaukuhlangana kweposiipayipiamathembaisandiso se-safariipayipi lokuthengisaI-Streakimisebenziukuthengisa iqembu
Ungayakha Kanjani Isiko Eliqhutshwa Yidatha Ukukhulisa Umugqa Ophansi Wenkampani Yakho